Izesekeli wenza kusukela ingwenya isikhumba ezihlobene nge ubukhazikhazi ethile kanye nesitayela. Futhi akumangalisi: ukuvumela umkhiqizo ezifana angakwazi ukukhokhela hhayi wonke umuntu. Abantu abaningi bakhetha ukuchitha imali ezinkulu zokuhamba noma izingubo kunokuba esikhwameni polkvartiry kuwufanele. Kodwa Ongoti wangempela izinga, ukunethezeka kanye nesitayela ngeke uzibe lo zikanokusho lesikhumba izimpahla. Kanjani ukuba wenze izinqumo ezinhle okungalungile futhi ukuze uqinisekise ukuthi isithombe sakho ehlotshisiwe lesikhumba ingwenya? Lolu lwazi olulandelayo.
Kungani kufanele ukhethe ingwenya isikhumba?
Isikhumba izilwane ezidla ezinye ezimbi kunazo zonke zaba ethandwa kusukela ezikhathini zasendulo. Ongoti imikhiqizo akugcini ngisho yinkimbinkimbi ukukhiqizwa impahla, kanye eliphezulu lokufa phakathi abazingeli lwesilo. Futhi ngenxa yokuthi bonke ingwenya isikhumba possesses eziningana izici ezibalulekile ukuze imikhiqizo efana:
Amandla. Imikhiqizo ezenziwe ingwenya isikhumba ezikhathini zasendulo ngisho esetshenziselwa zempi, kuminyene nokunokwethenjelwa indaba. Ngo umkhakha yesimanje, lesi sici ivumela isikhumba ukukhuluma mayelana izinga okusezingeni imikhiqizo yayo.
Ukuthamba. Naphezu ngamandla isikhumba ingwenya ngemva sigqoka efanele okungavamile kuba soft kakhulu. Lokhu kwandisa kuphela ezingeni wenduduzo nenjabulo ukusetshenziswa imikhiqizo yayo.
Ukucolisakala. Amazing isithombe yemvelo akudingi hardware okwengeziwe noma Umbala. Iphethini ingwenya isikhumba uhlukile, okubonisa wedwa ngomkhiqizo ngamunye kuwo.
Ukuvikeleka. imikhiqizo enjalo kungenziwa igqoke amashumi eminyaka. Okuqotho lesikhumba ingwenya cishe akaphelelwa ukubonakala kwawo futhi ihlala isikhathi eside. Izinto ezenziwe kuwo, singasho okuphakade.
Imikhiqizo ezenziwe ingwenya isikhumba yazuza eziningi udumo, elaliholela ekuzingeleni asebenzayo ezidla ezinye. Ngenxa ekubulaleni abantu abaningi abanye kwezilwane saphela.
Namuhla, womshini ingwenya isikhumba usebenzisa izinto eziphilayo azithathe ethathwe izilwane ephakanyiswe emapulazini ezikhethekile. Kodwa intengo kuthintwa insignificantly. Izimpahla eyenziwe bangempela ingwenya isikhumba kuyabiza kakhulu.
Imikhiqizo amanani: they dayisa ingwenya isikhumba?
Uma endulo Alligator wenza zempi nezihlangu ngenxa amandla awo, behlonipha zethu usuku ezikhethekile izicathulo kanye izesekeli ngakho. Ngoba abantu, anhlobonhlobo izicathulo ezahlukene. Ukuze abesifazane ukukhetha ngokwesiko ebanzi: ungathenga amabhuzu, izicathulo ngisho nezimbadada. Ngaphezu izicathulo, amabhande ethandwa, kanye zonke izinhlobo izikhwama. Abesilisa uncamela amaphothifoliyo kwelinye ibhizinisi ukusuka ingwenya isikhumba. Ingxenye enhle Abaklami cishe njalo ngonyaka onobuhle ezintsha ukunikela izikhwama futhi sisihle.
Lona nje uhlu encane zenziwe kusukela ingwenya isikhumba. Izinto lezi zincwadi babe ezinye izici ezivamile. Okokuqala - intengo. Ngenxa yokuba yinkimbinkimbi izimayini kanye sigqoka izinto, lwengwenya izinto eqolo. Umphumela lena sici esilandelayo ezivamile umkhiqizo elinjalo - isimo. Lezi sekeli ungakwazi ukukhokhela hhayi wonke umuntu. Futhi labo bangayiqonda kubo hhayi njengoba izinto ezingokoqobo futhi iqine, kodwa njengoba isici okunethezeka, ngaleyo ndlela egcizelela isimo sabo senhlalo.
Lezi izingwenya ezahlukene ...
Lapho ekhetha umkhiqizo, ngesisekelo okuyinto isikhumba ingwenya, kubalulekile ukwazi ukuthi azifani kanjani bayithanda ezinkulu. Okwamanje usebenzisa izinhlobo ezintathu izinto eziphilayo azithathe:
Alligator. Ayaziwa Its umbala sici endaweni peritoneal. Kuyinto kule ndawo kucatshangwa ukuthi eliphezulu kakhulu nabaqambi ibekwe endaweni egqamile komkhiqizo. Kuvele lwengwenya esiswini Ukunqamula iphethini ngesimo inkanyezi okungajwayelekile. Zonke izikali ezihlukahlukene, akukho iphethini ecacile weJiyomethri. Ehola lolu hlobo it has a uhlevane ingwenya, okuyinto zihlelwe by ezimbili bese bakha sebuningini imigqa.
isikhumba ingwenya. Lolu hlobo futhi izwe eyigugu evela esiswini. Umbala kuhlukile kancane kusukela lwengwenya. Omunye kungaba ukuhlukanisa iphethini ecacile weJiyomethri, iyunifomu ifomu izinhlayiya zeqhwa izikwele. Futhi maphakathi ngamunye nabo isifundo olunemininingwane ethe xaxa kungathola amachashazi ezincane. indawo isikhumba ekhanda ingwenya unamaqhubu. Kodwa ngokungafani i lwengwenya, basuke okuqoqwe amane nambili.
isikhumba Caiman. Kuzo zonke lezi zinhlobo ezichazwe ngokunembile lokhu wesikhumba luyingozi engabizi kakhulu. Kuyinto anolaka ngaphezulu, kanzima. It sibonisa inani elikhulu neziqu ayizindunduma phezu yonke indawo. isikhumba Caiman lingaphansi zikanokusho, kodwa uma qualitative abagqoke, usizo futhi ihlala isikhathi eside akukhona kunabayeni yezinye izinhlobo.
Engavamile izesekeli amahle kuyoba, saliphi - ingwenya. Izithombe ongayibonisa ngayo. Into esemqoka - musa ukwenza iphutha bese ukhetha umkhiqizo yemvelo ngempela hhayi mbumbulu.
Indlela ukuhlukanisa mbumbulu?
Uma wenza kanjalo unquma zithokozise umkhiqizo bangempela lwengwenya isikhumba, kubalulekile ukwazi eyisisekelo izici yaso eyingqayizivele. Funda ngokucophelela umkhiqizo ngaphambi kokuthenga. Okuqotho ingwenya lesikhumba has iphethini isici. Uhlala esiyingqayizivele. Qhathanisa kungaba nge zeminwe kubantu. Umkhiqizo wenziwe ingwenya okuqotho lesikhumba zonke izigcawu kuyoba ezahlukene: none ukuphinda ifomu bese uhlamvu emigqeni. Phinda sibalo efanayo endaweni yezimboni cishe akunakwenzeka.
Zizwe umkhiqizo. Okuqotho ingwenya lesikhumba, omnyama noma oluhlaza, kufanele kube soft, zazivuma, nge lamachubu obukhulu Horny, ezivame esisogwini ikhanda nomsila besikhumba saleso silwane. Lezi mabhamuza - futhi nokuqala kokuhlala kwezingxenye izicubu Horny, ngakho bathatha obukhulu kakhulu. Zama acindezele uhlevane uzipho. Uma ingwenya zemvelo, ngisho nomkhondo kwesokunxele kuso. Uyozizwa njengodade uma icindezelwa ethanjeni. Nokho, uma phambi kwakho inkohliso, le isifaca izoba indunduma.
Ngaphezu kwalokho, kufanele wazise intengo. Umkhiqizo wenziwe bangempela ingwenya isikhumba kuyoba eqolo ngaphezu kwanoma izimpahla ezenziwe kusukela nezinye izinto. Ukukhetha into alolu, kungcono ukuxhumana esitolo onguchwepheshe izinga izesekeli nge idumela elihle.
Ngaphambili kwakucatshangwa ukuthi imikhiqizo bangempela ingwenya isikhumba ungaba kuphela labo imibala esivela ngokwemvelo yakhe. Lokhu kungenxa yokuthi i-impahla eyigugu ekhiqizwa ngobukhulu ubunzima, futhi ngokucophelela usebenzile kanzima, balukhulume wesaba adalule umbala. Ngakho-ke imikhiqizo Iphalethi kwaba cishe okufanayo: a omnyama, onsundu amnyama, oluhlaza.
With ukuthuthukiswa umkhakha nezinkinga umbala ngezinto zemvelo sezedlule. Manje ungakwazi ngokungesabi ukunikeza eyigugu ingwenya isikhumba iyiphi nemfashini umthunzi futhi isicwebezelisi lacquer. Kungatholakala okwesibhakabhaka, obomvu, osawolintshi, ophuzi kanye neminye imikhiqizo. Ngakho-ke, manje umbala abakwazi ezifakazela material yemvelo noma emishinini.
Indlela anakekele into eyigugu?
Noma yimuphi, ngisho into eqinile kakhulu futhi iqine kudinga ukunakekelwa efanele. Isikhumba ingwenya brand nekaprizny. Kodwa ukubanakekela has umehluko wemisindo nemiqondo yamagama yayo. Ngokwesibonelo, ukugcina isikhumba kumele kube endaweni umoya: esikhwameni wenza izindwangu zemvelo. Isikhumba - material yemvelo futhi awukwazi ukubekezelela ukungabi emoyeni ukunyakaza. Uma ukungcoliswa okungcono kakhulu esinakho iwukusebenzisa isiponji esithambile futhi yokuwasha hlangothi, bese ukusula owomile umkhiqizo. Akubalulekile ukusebenzisa dryers kagesi, kanye ukuzama ukuze ome umkhiqizo ngqo eduze ukushisa imithombo.
It is nhlobo ukusebenzisa izinto zokuhlanza chemical equkethe utshwala, i-ammonia noma nezinye izinto oluyingozi. ingwenya isikhumba kungalimala itjhuguluko engekhe yalungiseka ulahlekelwe umsungulo yayo futhi ukuqhuma. Manje umuntu angakwazi ukuthenga amathuluzi ezikhethekile for ukunakekelwa kwesikhumba ezingavamile, okuzokwenza ukunweba ukuphila imikhiqizo zakho ozithandayo bese ugcine kwabo zibonakala kakhulu. Indlela ukukhethwa imikhiqizo evela ingwenya isikhumba, ngamabomu. Zizwe ukhululekile uthinte ubone into zakho ozithandayo. -accessory Kahle esikhethiweyo ngeke kuphela umphelelisi ukubukeka kwakho, kodwa futhi ukujabulisa lula yayo futhi iwusizo ngaphezu konyaka owodwa!
Sergei Zverev. Biography ubuntu enemisebenzi
Imeyili yama-SMTP amathrekhi nencazelo yawo
Ingabe Kungenzeka ukunciphisa umzimba ngosizo sodium ne indlela yokukwenza?
Mud intabamlilo e Anapa. Uhambo e Anapa. Anapa, intabamlilo Shugo
Ophephela abaphehla ugesi nge eksisi eqonde ngqo phezulu ujikeleza. Izinzuzo, nebubi nemibandela yokusebenza